တရုတ်ဘာသာစကား အဝေးရောက် ပို့ချမှု။ | Language Century Language Century
10:59 PM C-News , Chinese
သင်တန်းလာတက်ရန် မအားလပ်ကြသူများ၊ နယ်ဝေး သို့မဟုတ် နိုင်ငံရပ်ခြားမှ လေ့လာလိုကြသူများအတွက် တရုတ်စကားလေ့လာရန် အဆင်အပြေဆုံး အစီအစဉ်ကောင်းလေးတစ်ခုနဲ့ မိတ်ဆက်ပေးပါရစေ။
Chinese for all Admin Team မှ Offline ပို့ချပေးမည့် ဗီဒီယိုသင်ခန်းစာတွေကို မြန်မာနိုင်ငံအနှံ့အပြားရှိ တရုတ်စကား လေ့လာလိုသူများနှင့် ကမ္ဘာ့နိုင်ငံအသီးသီးရှိ တရုတ်စကား လေ့လာလိုသော မြန်မာလူမျိုးများအတွက် စတင် ရောင်းချပေးနေပါပြီ။
Chinese for all မှ အဝေးရောက်ပို့ချပေးမယ့် ဗီဒီယို သင်ခန်းစာတွေကို ၁၅ မိနစ်လောက်ပဲ အချိန်ပေးပြီး လေ့လာလိုက်တာနဲ့ သင့်အတွက် တကယ်တန်ဖိုးရှိတဲ့ ပညာဗဟုသုတတွေ ရရှိသွားစေမှာပါ။
အဝေးရောက် သင်ကြားမှု အစီအစဉ်ဟာ Video သင်ခန်းစာများနဲ့သာ သီးသန့်ပို့ချပေးသွားမှာဖြစ်ပြီး၊ ပို့ချပေးမယ့် သင်ရိုးများကို အတိအကျ ရေးဆွဲထားပါတယ်။
သင်တန်းခန်းမထဲမှာ ဆရာကိုယ်တိုင် အနီးကပ်ပို့ချပေးနေသလို ထိရောက်မှုရှိစေတဲ့ ဗီဒီယိုသင်ခန်းစာ စုစုပေါင်း ၂၅၀ ကျော်ပါဝင်ပါတယ်။
Video Lesson များ ထည့်သွင်းထားတဲ့ Stick / SD Card တစ်ခုကို လေးသောင်းကျပ်ဖြင့် ဝယ်ယူလေ့လာနိုင်ပါတယ်။
သင်တန်းကျောင်းသို့ ဆက်သွယ်မှာယူရန် ဖုန်းနံပါတ်
09-760-853812 ပိတ်ရက်မရှိ၊ မနက် ၈း၀၀ နာရီမှ ည ၇း၃၀ နာရီအတွင်း ဆက်သွယ်နိုင်ပါတယ်။
★ သင်ကြားမည့် ပုံစံ
ဗီဒီယိုသင်ခန်းစာ အဝေးရောက် ပို့ချမှုရဲ့ ရည်ရွယ်ချက်က မိမိဘာသာ Selfstudy လေ့လာလို့ရအောင် အစီအစဉ်လုပ်ထားတာပါ။
Offline Learning မှာ သဒ္ဒါ၊ စကားပြော၊ ဝေါဟာရ၊ အသံထွက်၊ နားထောင်စွမ်းရည်၊ အင်တာဗျူး၊ တရုတ်စာရေးနည်းစတဲ့ သင်ခန်းစာတွေကို ကျောင်းခန်းထဲမှာ ပို့ချသလိုမျိုး Video Tutorial အနေနဲ့ သင်ပြပေးမှာပါ။
[ သတိပြု- Online ဖွင့်ပြီး အပြန်အလှန် အမေးအဖြေ ပုံစံမျိုး သင်ကြားပေးခြင်း မဟုတ်ပါ ]
★ သင်ကြားပေးမည့် သင်ရိုးများ
A - သဒ္ဒါ သင်ခန်းစာများ
B - ဝေါဟာရများ
C - ဝါကျတိုများ
D - အသံထွက် သင်ခန်းစာများ
E - အင်တာဗျူးဖြေဆိုရန် လေ့ကျင့်ခန်းများ
F - တရုတ်စကားပြော
G - တရုတ်စာ ရေးနည်းများ
H - ဝေါဟာရဉာဏ်စမ်း လေ့ကျင့်ခန်းများ
I - ဆရာ စိုင်းဆိုင်ခမ်းဝ်၏ Pdf စာအုပ်များ
J - Android Application များ
K - တရုတ်သီချင်းများ (MP-3)
L - HSK Level 1 မှ6အထိ မေးခွန်းနမူနာ pdf များနှင့် တွဲဖက်လေ့ကျင့်ရန် Mp3 အသံဖိုင်များ
[ I, J, K, L မှာ လက်ဆောင်အဖြစ် ထည့်သွင်းပေးထားခြင်း ဖြစ်ပါသည်။ ]
★ မြန်မာပြည်တွင်းမှ လေ့လာလိုသူများအတွက်
သင်တန်းကြေး လေးသောင်းကျပ်ဖြင့် Chinese For All Offline Learning Video သင်ခန်းစာတွေ ထည့်သွင်းထားတဲ့ Memory Stick / SD Card ကို ဝယ်ယူလေ့လာနိုင်ပါတယ်။
သဒ္ဒါသင်ခန်းစာ Video ငါးဆယ်ခန့်နဲ့ အခြား Video Lesson နှစ်ရာကျော် ပါရှိပါမယ်။ Video သင်ခန်းစာတွေကို 16-GB Memory Stick သို့မဟုတ် 8-GB SD Card ဖြင့် ထည့်သွင်းပေးထားပါတယ်။ Stick ဖိုး၊ Card ဖိုး ထပ်ပေးစရာ မလိုပါ။
ရန်ကုန်မြို့မှ ဝယ်ယူလေ့လာလိုပါက သင်တန်းကျောင်းသို့ လူကိုယ်တိုင် လာရောက် ဝယ်ယူနိုင်ပါတယ်။
အမှတ် (၆၆ / ၆၈) ၊ ၄-လွှာ၊ စံရိပ်ငြိမ် မှတ်တိုင်၊
လှည်းတန်းအနီး၊ ကမာရွတ်မြို့နယ်၊ ရန်ကုန်မြို့။
Tel : 09-2549-03604 , 09-799-656514
နယ်မှ ဝယ်ယူလေ့လာလိုပါက ဝယ်ယူသူ၏ မြို့ရှိ အဝေးပြေးကားဂိတ်ထိ ပို့ဆောင်ပေးပါတယ်။ မိမိတို့မြို့ရှိ အဝေးပြေးကားဂိတ်မှာ မိမိဘာသာ ရွေးယူရမှာဖြစ်ပါတယ်။
အသေးစိတ် စုံစမ်းလိုပါက Chinese For All Admin Team ဖုန်းနံပါတ် 09-760-853812 သို့ ဆက်သွယ် မေးမြန်းနိုင်ပါတယ်။
★ နိုင်ငံခြားမှ လေ့လာလိုသူများအတွက်
သင်တန်းကြေး လေးသောင်းကျပ်ဖြင့် Chinese For All (Online Learning) Group ထဲသို့ Member ဝင်ပြီး လေ့လာနိုင်ပါတယ်။
သဒ္ဒါသင်ခန်းစာ Video ငါးဆယ်ခန့်နဲ့ အခြား Video Lesson နှစ်ရာကျော် ပါရှိပါမယ်။
လေ့လာလိုသူများအနေနဲ့ မိမိ Member ဝင်တဲ့နေ့ကနေစပြီး ဗီဒီယိုသင်ခန်းစာ စုစုပေါင်း ၂၆၀ ခန့်ကို
Member ဝင်တာမှာလည်း စောတာတို့၊ နောက်ကျလို့ စာလိုက်မမီတာမျိုး မရှိပါဘူး။ ဆိုလိုတာကတော့ မိမိ Member ဖြစ်သွားတာနဲ့ Group ထဲက Video ပို့ချချက်တွေကို Lesson-1 ကနေ စတင်လေ့လာလို့ရပါတယ်။
Group Member များအနေဖြင့် ဒီ Video သင်ခန်းစာအားလုံးကို Download ရယူလိုပါက မိမိတို့၏ G-mail Account မှတဆင့် အလွယ်တကူ ရယူနိုင်စေရန် G-mail Service တစ်ခု ဖွင့်လှစ်ပေးထားပါတယ်။
Chinese For All (Online Learning) Group ထဲ ဝင်ရောက်ရန်နှင့် Group အကြောင်း အသေးစိတ်သိရှိနိုင်ရန် Admin - Sai Hsai Kham ကို Friend Add ထားပြီး Messenger မှ ဆက်သွယ်နိုင်ပါတယ်။
Memory Stick သို့မဟုတ် SD Card ဝယ်ယူလေ့လာပါက အင်တာနက် ဖွင့်စရာမလိုတဲ့အပြင် မိမိအားလပ်တဲ့အချိန် ဘယ်ချိန်မဆို အလွယ်တကူ လေ့လာနိုင်ပါတယ်။
သင်ကြားရေး Memory Stick သို့မဟုတ် SD Card တွေကို တီဗီ၊ ကွန်ပျူတာ၊ မိုဘိုင်းဖုန်းတို့နဲ့ အလွယ်တကူ ချိတ်ဆက်လေ့လာနိုင်ပါတယ်။
မိမိဘာသာ စကားပြောစာအုပ် ဝယ်ယူလေ့လာပါက ဝါကျများနဲ့ ဝေါဟာရတွေအတွက် အသံထွက် ခက်ခဲနိုင်ပါတယ်။
Video ထဲမှာတော့ အသုံးအများဆုံးဝေါဟာရတွေနဲ့ ဝါကျတွေကို တရုတ်စာလုံး၊ pinyin ( နိုင်ငံတကာ အသံထွက်စနစ်)၊ အနီးစပ်ဆုံး မြန်မာအသံထွက်၊ မြန်မာအဓိပ္ပာယ်များ ပါရှိပြီး၊ Native Speaker အသံဖိုင်ဖြင့် ပို့ချထားပါတယ်။
ဝေါဟာရတွေ သိရှိပြီးနောက် တရုတ်ဝါကျများကို မိမိဘာသာ စဉ်းစားပြောဆိုတတ်စေရန်အတွက် အခြေခံမှစ၍ တဆင့်ချင်း ရှင်းပြထားတဲ့ Chinese Grammar သင်ခန်းစာတွေက သင့်ကို တရုတ်စကားပြောတတ်လာစေရန် လုံးဝ ပံ့ပိုးပေးနိုင်ပါတယ်။
အဓိကအချက်အနေနဲ့ သင်ကြားပေးမယ့် သင်ရိုးတွေကို အတိအကျ ရေးဆွဲထားတာဖြစ်လို့ လုံးဝ မသင်ဖူးသေးရင်တောင်မှ အခြေခံကနေ တဆင့်ချင်း စနစ်တကျ လေ့လာသင်ယူနိုင်ပါတယ်။
ဒီသင်ရိုးတစ်ခုလုံးရဲ့ အဓိက အစိတ်အပိုင်းအဖြစ် တရုတ်သဒ္ဒါ သင်ခန်းစာ ၅၁ ခန်းကို အဆင့်ဆင့် လေ့လာရမှာဖြစ်ပြီး မိမိရဲ့ တတ်မြောက်မှုတွေကို ပြန်လည်စစ်ဆေးနိုင်စေဖို့ သင်ခန်းစာတစ်ခုချင်းစီမှာ လေ့ကျင့်ခန်းများစွာနဲ့ အဖြေမှန်တွေကို ထည့်သွင်းပေးထားပါတယ်။
အွန်လိုင်းမှာ ပရဟိတ ပို့ချနေတဲ့ Chinese for all Admin အဖွဲ့မှ ပူးပေါင်းစီစဉ်ထားသဖြင့် စိတ်ချယုံကြည်စွာ လေ့လာသင်ယူနိုင်ပါတယ်။
★ လေ့လာရမည့် ဗီဒီယို သင်ခန်းစာများ
၁။ သဒ္ဒါသင်ခန်းစာ ပို့ချချက်။
A1001 S + V
A1002 S + V + 吗
A1003 S + 不 + V
A1004 S + 不 + V + 吗
A1005 S + V + O
A1006 S + 不 + V + O
A1007 S + V + V
A1008 S + 不 + V + V
A1009 S + V + V + O
A1010 S + 不 + V + V + O
A1011 S + V + O + V + O
A1012 S + 不 + V + V + O
A1013 S + V + 不 + V + O Part-1
A1014 S + V + 不 + V + O Part-2
A1015 S + V + 不 + V + V + O
A1016 S + T.N + V + O
A1017 S + T.N + 不 + V + O
A1018 S + 想 + V + O
A1019 S + 不 + 想 + V + O
A1020 S + 会 + V + O
A1021 S + 可以 + V + O
A1022 S + 敢 + V + O
A1023 S + 应该 + V + O
A1024 S + 要 + V + O
A1025 S + 不 + Aux + V
A1026 S + T.N + Aux + V + O Part-1
A1027 S + T.N + Aux + V + O Part-2
A1028 S + Aux + 不 + Aux + V
A1029 为什么 + V
A1030 什么时候 + V
A1031 怎么 + V
A1032 谁 + V
A1033 V + 谁
A1034 谁 + 的 + N
A1035 V + 什么
A1036 什么 + N
A1037 V + 哪里
A1038 哪里 + 的 + N
A1039 S + 怎么样
A1040 S + O + V + 得 + 怎么样
A1041 S + 多少
A1042 多少 + N
A1043 几 + MW + N
A1044 S + 是 + O
A1045 S + 有 + O
A1046 S + 在 + O
A1047 S + V + O + 了
A1048 S + V + 过 + O
A1049 S + Adj
A1050 Attr + 的 + N
A1051 不要 / 别 + V
၂။ ဝေါဟာရများ ပို့ချချက်။
B1006 တစ်နှစ်အတွင်းရှိ လများ
B1009 နိုင်ငံ၊ မြို့တော်နှင့် လူမျိုး
B1011 တစ်ပတ်အတွင်းရှိ နေ့ရက်များ -၁
B1012 တစ်ပတ်အတွင်းရှိ နေ့ရက်များ -၂
B1013 တစ်လအတွင်းရှိ နေ့ရက်များ
B1020 အိမ်သုံးလျှပ်စစ်ပစ္စည်းများ- ၁
B1021 အိမ်သုံးလျှပ်စစ်ပစ္စည်းများ- ၂
B1026 အဝတ်အစားများ - ၁
B1027 အဝတ်အစားများ - ၂
B1028 အဝတ်အစားများ - ၃
B1029 ကျန်းမားရေး - ၁
B1030 ကျန်းမားရေး - ၂
B1036 ဟင်းချက်ရာတွင် သုံးသောပစ္စည်းများ
၃။ ဝါကျတိုများ ပို့ချချက်။
C1002 မျိုးနွယ်နှင့် နာမည်မေးခြင်း
C1003 ကျေးဇူးတင် စကားများ
C1008 ရက်၊ လ၊ နှစ်
C1010 ဈေးဝယ်ထွက်ခြင်း -၁
C1011 ဈေးဝယ်ထွက်ခြင်း -၂
C1015 ပြန်ကာနီး နှုတ်ဆက်ခြင်း
C1022 စကားစု အတိုလေးများ
C1023 ဝါကျတိုများ စုစည်းမှု
C1025 မိတ်ဆွေဟောင်းနဲ့ စကားပြောခြင်း
C1030 သင်္ချာဂဏန်းများ ရေတွက်ခြင်း
၄။ အသံထွက်သင်ခန်းစာ (Pinyin) ပို့ချချက်။
D1001 i - u - ü
D1002a- ia - ua
D1003 o - uo
D1004e- ie - üe
D1005 ai - uai
D1006 ei - ui
D1007 ao - iao
D1008 ou - iu
D1009 an - ian - uan - üan
D1010 en - in - ün
D1011 ang - iang - uang
D1012 eng - ing - ueng
D1013 ong - iong
D1014 သတိပြုစရာ အချက်များ
၅။ အင်တာဗျူးဖြေဆိုရန် သင်ခန်းစာများ။
E1001 CV Form ဖြည့်ခြင်း
E1002 အင်တာဗျူး လေ့ကျင့်ခန်း - ၁
E1003 အင်တာဗျူး လေ့ကျင့်ခန်း - ၂
E1004 အင်တာဗျူး လေ့ကျင့်ခန်း - ၃
E1005 အင်တာဗျူး လေ့ကျင့်ခန်း - ၄
E1006 အင်တာဗျူး လေ့ကျင့်ခန်း - ၅
E1007 အင်တာဗျူး လေ့ကျင့်ခန်း - ၆
E1008 အင်တာဗျူး လေ့ကျင့်ခန်း - ၇
၆။ လိုတိုရှင်း တရုတ်စကားပြော
F1004 ထမင်းစားခြင်း - ၁
F1005 ထမင်းစားခြင်း - ၂
F1006 ဖုန်းဆက်ခြင်း - ၁
F1007 ဖုန်းဆက်ခြင်း - ၂
F1020 အချိန်နာရီအကြောင်း - ၁
F1021 အချိန်နာရီအကြောင်း - ၂
F1026 လမ်းမေး၊ လမ်းညွှန်ခြင်း
F1035 အင်တာနက်မှ ဗန်းစကားများ
၇။ တရုတ်စာ ရေးသားနည်း
G1001 အခြေခံ စုတ်ချက် ၆ မျိုး
G1002 စုတ်ချက်ကွေး ၂၅ မျိုး
G1003 တရုတ်စာလုံး အစိတ်အပိုင်းများ
G1006 တရုတ်စာလုံး မှတ်သားနည်း
G1009 လေ့ကျင့်ခန်း - ၁
G1011 လေ့ကျင့်ခန်း - ၂
G1013 လေ့ကျင့်ခန်း - ၃
G1015 လေ့ကျင့်ခန်း - ၄
G1017 လေ့ကျင့်ခန်း - ၅
G1019 ကြိယာဝိသေသနများ - ၁
G1020 ကြိယာဝိသေသနများ - ၂
G1021 ကြိယာဝိသေသနများ - ၃
G1022 ဝိဘတ်များ - ၁
G1023 ဝိဘတ်များ - ၂
G1024 စကားဆက်များ - ၁
G1025 စကားဆက်များ - ၂
G1026 စကားဆက်များ - ၃
G1028 အညွှန်းနာမ်စားနှင့် မျိုးပြများ
G1032 နှစ်၊ လ၊ ရက်
G1037 နေရာပြ စကားလုံးများ
G1041 အသုံးများသော ကြိယာများ - ၁
G1042 အသုံးများသော ကြိယာများ - ၂
G1043 အသုံးများသော ကြိယာများ - ၃
G1044 အသုံးများသော ကြိယာများ - ၄
G1045 အသုံးများသော ကြိယာများ - ၅
G1046 အသုံးများသော နာမဝိသေသနများ - ၁
G1047 အသုံးများသော နာမဝိသေသနများ - ၂
G1048 အသုံးများသော နာမဝိသေသနများ - ၃
G1049 အသုံးများသော နာမဝိသေသနများ - ၄
G1050 အသုံးများသော နာမဝိသေသနများ - ၅
၈။ ဝေါဟာရ ဉာဏ်စမ်းများ
စုစုပေါင်း ဗီဒီယိုသင်ခန်းစာ (၃၈) ဖိုင်
★ နမူနာ လေ့လာရန် ဗီဒီယိုများ
ဗီဒီယိုတွေကို ဘယ်လိုပို့ချထားတာလဲ။ လေ့လာသူတွေအနေနဲ့ ဘယ်လို လေ့လာရမှာလဲ။ ဘယ်လောက်ထိ ထိရောက်မှု ရှိနိုင်လဲဆိုတာတော့ သင်လည်း သိချင်မှာပါ။
ဒီတော့ သင်ခန်းစာတွေကို မဝယ်ခင်မှာ ကြိုတင်လေ့လာနိုင်အောင် အောက်မှာပေးထားတဲ့ ဗီဒီယို Link တွေကို နှိပ်ကြည့်ပြီး နမူနာအနေနဲ့ လေ့လာကြည့်ရှုနိုင်ပါတယ်။ အဲဒီလို သင်ခန်းစာချည်းပဲ ၂၆၀ ခန့်ကို သင် လေ့လာရမှာပါ။
Writing- တရုတ်စာလုံး မှတ်သားနည်း
Writing- တရုတ်စာလုံး အစိတ်အပိုင်းများ
★ Website မှာ ဘယ်လို လေ့လာမလဲ ?
Chinese for all Admin Team အနေနဲ့ တရုတ်ဘာသာစကား ပို့ချချက်များကို Google နဲ့ YouTube တို့မှာလည်း နေ့စဉ် လွှင့်တင်ပေးနေပါတယ်။
ကျွန်တော်တို့ရဲ့ Website လိပ်စာမှာ www.languagecentury.com ဖြစ်ပြီး၊ သင် သိရှိလိုတဲ့ တရုတ်ဝေါဟာရတွေကို မြန်မာစာလုံးပေါင်းနဲ့ အလွယ်တကူ ရှာဖွေနိုင်အောင် လွှင့်တင်ပေးထားတာပါ။
★ Google မှာ ဘယ်လို လေ့လာမလဲ ?
ဥပမာ - သင်က ငပိရည် ကို တရုတ်လို သိချင်ပါက ကျွန်တော်တို့ Webdite သို့မဟုတ် Google Search Box မှာ " ငပိရည် တရုတ်လို " စသည်ဖြင့် ရိုက်ထည့်လိုက်ရုံနဲ့ အလွယ်တကူ လေ့လာနိုင်ပါတယ်။
★ YouTube မှာ ဘယ်လို လေ့လာမလဲ ?
တကယ်လို့ YouTube မှာ လေ့လာလိုပါက Search Box မှာ " Sai Hsai Kham Chinese for all " လို့ ရိုက်ထည့်လိုက်ရုံနဲ့ မြန်မာလို ရှင်းပြထားတဲ့ ဗီဒီယို သင်ခန်းစာတွေကို အလွယ်တကူ လေ့လာနိုင်ပါတယ်။
တရုတျဘာသာစကား အဝေးရောကျ ပို့ခမြှု။
သငျတနျးလာတကျရနျ မအားလပျကွသူမြား၊ နယျဝေး သို့မဟုတျ နိုငျငံရပျခွားမှ လလေ့ာလိုကွသူမြားအတှကျ တရုတျစကားလလေ့ာရနျ အဆငျအပွဆေုံး အစီအစဉျကောငျးလေးတဈခုနဲ့ မိတျဆကျပေးပါရစေ။
Chinese for all Admin Team မှ Offline ပို့ခပြေးမညျ့ ဗီဒီယိုသငျခနျးစာတှကေို မွနျမာနိုငျငံအနှံ့အပွားရှိ တရုတျစကား လလေ့ာလိုသူမြားနှငျ့ ကမ်ဘာ့နိုငျငံအသီးသီးရှိ တရုတျစကား လလေ့ာလိုသော မွနျမာလူမြိုးမြားအတှကျ စတငျ ရောငျးခပြေးနပေါပွီ။
Chinese for all မှ အဝေးရောကျပို့ခပြေးမယျ့ ဗီဒီယို သငျခနျးစာတှကေို ၁၅ မိနဈလောကျပဲ အခြိနျပေးပွီး လလေ့ာလိုကျတာနဲ့ သငျ့အတှကျ တကယျတနျဖိုးရှိတဲ့ ပညာဗဟုသုတတှေ ရရှိသှားစမှောပါ။
အဝေးရောကျ သငျကွားမှု အစီအစဉျဟာ Video သငျခနျးစာမြားနဲ့သာ သီးသနျ့ပို့ခပြေးသှားမှာဖွဈပွီး၊ ပို့ခပြေးမယျ့ သငျရိုးမြားကို အတိအကြ ရေးဆှဲထားပါတယျ။
သငျတနျးခနျးမထဲမှာ ဆရာကိုယျတိုငျ အနီးကပျပို့ခပြေးနသေလို ထိရောကျမှုရှိစတေဲ့ ဗီဒီယိုသငျခနျးစာ စုစုပေါငျး ၂၅၀ ကြျောပါဝငျပါတယျ။
Video Lesson မြား ထညျ့သှငျးထားတဲ့ Stick / SD Card တဈခုကို လေးသောငျးကပျြဖွငျ့ ဝယျယူလလေ့ာနိုငျပါတယျ။
သငျတနျးကြောငျးသို့ ဆကျသှယျမှာယူရနျ ဖုနျးနံပါတျ
09-760-853812 ပိတျရကျမရှိ၊ မနကျ ၈း၀၀ နာရီမှ ည ရး၃၀ နာရီအတှငျး ဆကျသှယျနိုငျပါတယျ။
★ သငျကွားမညျ့ ပုံစံ
ဗီဒီယိုသငျခနျးစာ အဝေးရောကျ ပို့ခမြှုရဲ့ ရညျရှယျခကျြက မိမိဘာသာ Selfstudy လလေ့ာလို့ရအောငျ အစီအစဉျလုပျထားတာပါ။
Offline Learning မှာ သဒ်ဒါ၊ စကားပွော၊ ဝေါဟာရ၊ အသံထှကျ၊ နားထောငျစှမျးရညျ၊ အငျတာဗြူး၊ တရုတျစာရေးနညျးစတဲ့ သငျခနျးစာတှကေို ကြောငျးခနျးထဲမှာ ပို့ခသြလိုမြိုး Video Tutorial အနနေဲ့ သငျပွပေးမှာပါ။
[ သတိပွု- Online ဖှငျ့ပွီး အပွနျအလှနျ အမေးအဖွေ ပုံစံမြိုး သငျကွားပေးခွငျး မဟုတျပါ ]
★ သငျကွားပေးမညျ့ သငျရိုးမြား
A - သဒ်ဒါ သငျခနျးစာမြား
B - ဝေါဟာရမြား
C - ဝါကတြိုမြား
D - အသံထှကျ သငျခနျးစာမြား
E - အငျတာဗြူးဖွဆေိုရနျ လကေ့ငျြ့ခနျးမြား
F - တရုတျစကားပွော
G - တရုတျစာ ရေးနညျးမြား
H - ဝေါဟာရဉာဏျစမျး လကေ့ငျြ့ခနျးမြား
I - ဆရာ စိုငျးဆိုငျခမျးဝျ၏ Pdf စာအုပျမြား
J - Android Application မြား
K - တရုတျသီခငျြးမြား (MP-3)
L - HSK Level 1 မှ6အထိ မေးခှနျးနမူနာ pdf မြားနှငျ့ တှဲဖကျလကေ့ငျြ့ရနျ Mp3 အသံဖိုငျမြား
[ I, J, K, L မှာ လကျဆောငျအဖွဈ ထညျ့သှငျးပေးထားခွငျး ဖွဈပါသညျ။ ]
★ မွနျမာပွညျတှငျးမှ လလေ့ာလိုသူမြားအတှကျ
သငျတနျးကွေး လေးသောငျးကပျြဖွငျ့ Chinese For All Offline Learning Video သငျခနျးစာတှေ ထညျ့သှငျးထားတဲ့ Memory Stick / SD Card ကို ဝယျယူလလေ့ာနိုငျပါတယျ။
သဒ်ဒါသငျခနျးစာ Video ငါးဆယျခနျ့နဲ့ အခွား Video Lesson နှဈရာကြျော ပါရှိပါမယျ။ Video သငျခနျးစာတှကေို 16-GB Memory Stick သို့မဟုတျ 8-GB SD Card ဖွငျ့ ထညျ့သှငျးပေးထားပါတယျ။ Stick ဖိုး၊ Card ဖိုး ထပျပေးစရာ မလိုပါ။
ရနျကုနျမွို့မှ ဝယျယူလလေ့ာလိုပါက သငျတနျးကြောငျးသို့ လူကိုယျတိုငျ လာရောကျ ဝယျယူနိုငျပါတယျ။
အမှတျ (၆၆ / ၆၈) ၊ ၄-လှာ၊ စံရိပျငွိမျ မှတျတိုငျ၊
လှညျးတနျးအနီး၊ ကမာရှတျမွို့နယျ၊ ရနျကုနျမွို့။
နယျမှ ဝယျယူလလေ့ာလိုပါက ဝယျယူသူ၏ မွို့ရှိ အဝေးပွေးကားဂိတျထိ ပို့ဆောငျပေးပါတယျ။ မိမိတို့မွို့ရှိ အဝေးပွေးကားဂိတျမှာ မိမိဘာသာ ရှေးယူရမှာဖွဈပါတယျ။
အသေးစိတျ စုံစမျးလိုပါက Chinese For All Admin Team ဖုနျးနံပါတျ 09-760-853812 သို့ ဆကျသှယျ မေးမွနျးနိုငျပါတယျ။
★ နိုငျငံခွားမှ လလေ့ာလိုသူမြားအတှကျ
သငျတနျးကွေး လေးသောငျးကပျြဖွငျ့ Chinese For All (Online Learning) Group ထဲသို့ Member ဝငျပွီး လလေ့ာနိုငျပါတယျ။
သဒ်ဒါသငျခနျးစာ Video ငါးဆယျခနျ့နဲ့ အခွား Video Lesson နှဈရာကြျော ပါရှိပါမယျ။
လလေ့ာလိုသူမြားအနနေဲ့ မိမိ Member ဝငျတဲ့နကေ့နစေပွီး ဗီဒီယိုသငျခနျးစာ စုစုပေါငျး ၂၆၀ ခနျ့ကို
Member ဝငျတာမှာလညျး စောတာတို့၊ နောကျကလြို့ စာလိုကျမမီတာမြိုး မရှိပါဘူး။ ဆိုလိုတာကတော့ မိမိ Member ဖွဈသှားတာနဲ့ Group ထဲက Video ပို့ခခြကျြတှကေို Lesson-1 ကနေ စတငျလလေ့ာလို့ရပါတယျ။
Group Member မြားအနဖွေငျ့ ဒီ Video သငျခနျးစာအားလုံးကို Download ရယူလိုပါက မိမိတို့၏ G-mail Account မှတဆငျ့ အလှယျတကူ ရယူနိုငျစရေနျ G-mail Service တဈခု ဖှငျ့လှဈပေးထားပါတယျ။
Chinese For All (Online Learning) Group ထဲ ဝငျရောကျရနျနှငျ့ Group အကွောငျး အသေးစိတျသိရှိနိုငျရနျ Admin - Sai Hsai Kham ကို Friend Add ထားပွီး Messenger မှ ဆကျသှယျနိုငျပါတယျ။
Memory Stick သို့မဟုတျ SD Card ဝယျယူလလေ့ာပါက အငျတာနကျ ဖှငျ့စရာမလိုတဲ့အပွငျ မိမိအားလပျတဲ့အခြိနျ ဘယျခြိနျမဆို အလှယျတကူ လလေ့ာနိုငျပါတယျ။
သငျကွားရေး Memory Stick သို့မဟုတျ SD Card တှကေို တီဗီ၊ ကှနျပြူတာ၊ မိုဘိုငျးဖုနျးတို့နဲ့ အလှယျတကူ ခြိတျဆကျလလေ့ာနိုငျပါတယျ။
မိမိဘာသာ စကားပွောစာအုပျ ဝယျယူလလေ့ာပါက ဝါကမြားနဲ့ ဝေါဟာရတှအေတှကျ အသံထှကျ ခကျခဲနိုငျပါတယျ။
Video ထဲမှာတော့ အသုံးအမြားဆုံးဝေါဟာရတှနေဲ့ ဝါကတြှကေို တရုတျစာလုံး၊ pinyin ( နိုငျငံတကာ အသံထှကျစနဈ)၊ အနီးစပျဆုံး မွနျမာအသံထှကျ၊ မွနျမာအဓိပ်ပာယျမြား ပါရှိပွီး၊ Native Speaker အသံဖိုငျဖွငျ့ ပို့ခထြားပါတယျ။
ဝေါဟာရတှေ သိရှိပွီးနောကျ တရုတျဝါကမြားကို မိမိဘာသာ စဉျးစားပွောဆိုတတျစရေနျအတှကျ အခွခေံမှစ၍ တဆငျ့ခငျြး ရှငျးပွထားတဲ့ Chinese Grammar သငျခနျးစာတှကေ သငျ့ကို တရုတျစကားပွောတတျလာစရေနျ လုံးဝ ပံ့ပိုးပေးနိုငျပါတယျ။
အဓိကအခကျြအနနေဲ့ သငျကွားပေးမယျ့ သငျရိုးတှကေို အတိအကြ ရေးဆှဲထားတာဖွဈလို့ လုံးဝ မသငျဖူးသေးရငျတောငျမှ အခွခေံကနေ တဆငျ့ခငျြး စနဈတကြ လလေ့ာသငျယူနိုငျပါတယျ။
ဒီသငျရိုးတဈခုလုံးရဲ့ အဓိက အစိတျအပိုငျးအဖွဈ တရုတျသဒ်ဒါ သငျခနျးစာ ၅၁ ခနျးကို အဆငျ့ဆငျ့ လလေ့ာရမှာဖွဈပွီး မိမိရဲ့ တတျမွောကျမှုတှကေို ပွနျလညျစဈဆေးနိုငျစဖေို့ သငျခနျးစာတဈခုခငျြးစီမှာ လကေ့ငျြ့ခနျးမြားစှာနဲ့ အဖွမှေနျတှကေို ထညျ့သှငျးပေးထားပါတယျ။
အှနျလိုငျးမှာ ပရဟိတ ပို့ခနြတေဲ့ Chinese for all Admin အဖှဲ့မှ ပူးပေါငျးစီစဉျထားသဖွငျ့ စိတျခယြုံကွညျစှာ လလေ့ာသငျယူနိုငျပါတယျ။
★ လလေ့ာရမညျ့ ဗီဒီယို သငျခနျးစာမြား
၁။ သဒ်ဒါသငျခနျးစာ ပို့ခခြကျြ။
၂။ ဝေါဟာရမြား ပို့ခခြကျြ။
B1006 တဈနှဈအတှငျးရှိ လမြား
B1009 နိုငျငံ၊ မွို့တျောနှငျ့ လူမြိုး
B1011 တဈပတျအတှငျးရှိ နရေ့ကျမြား -၁
B1012 တဈပတျအတှငျးရှိ နရေ့ကျမြား -၂
B1013 တဈလအတှငျးရှိ နရေ့ကျမြား
B1020 အိမျသုံးလြှပျစဈပစ်စညျးမြား- ၁
B1021 အိမျသုံးလြှပျစဈပစ်စညျးမြား- ၂
B1026 အဝတျအစားမြား - ၁
B1027 အဝတျအစားမြား - ၂
B1028 အဝတျအစားမြား - ၃
B1029 ကနျြးမားရေး - ၁
B1030 ကနျြးမားရေး - ၂
B1036 ဟငျးခကျြရာတှငျ သုံးသောပစ်စညျးမြား
၃။ ဝါကတြိုမြား ပို့ခခြကျြ။
C1002 မြိုးနှယျနှငျ့ နာမညျမေးခွငျး
C1003 ကြေးဇူးတငျ စကားမြား
C1008 ရကျ၊ လ၊ နှဈ
C1010 ဈေးဝယျထှကျခွငျး -၁
C1011 ဈေးဝယျထှကျခွငျး -၂
C1015 ပွနျကာနီး နှုတျဆကျခွငျး
C1022 စကားစု အတိုလေးမြား
C1023 ဝါကတြိုမြား စုစညျးမှု
C1025 မိတျဆှဟေောငျးနဲ့ စကားပွောခွငျး
C1030 သခငြ်္ာဂဏနျးမြား ရတှေကျခွငျး
၄။ အသံထှကျသငျခနျးစာ (Pinyin) ပို့ခခြကျြ။
D1014 သတိပွုစရာ အခကျြမြား
၅။ အငျတာဗြူးဖွဆေိုရနျ သငျခနျးစာမြား။
E1001 CV Form ဖွညျ့ခွငျး
E1002 အငျတာဗြူး လကေ့ငျြ့ခနျး - ၁
E1003 အငျတာဗြူး လကေ့ငျြ့ခနျး - ၂
E1004 အငျတာဗြူး လကေ့ငျြ့ခနျး - ၃
E1005 အငျတာဗြူး လကေ့ငျြ့ခနျး - ၄
E1006 အငျတာဗြူး လကေ့ငျြ့ခနျး - ၅
E1007 အငျတာဗြူး လကေ့ငျြ့ခနျး - ၆
E1008 အငျတာဗြူး လကေ့ငျြ့ခနျး - ၇
၆။ လိုတိုရှငျး တရုတျစကားပွော
F1004 ထမငျးစားခွငျး - ၁
F1005 ထမငျးစားခွငျး - ၂
F1006 ဖုနျးဆကျခွငျး - ၁
F1007 ဖုနျးဆကျခွငျး - ၂
F1020 အခြိနျနာရီအကွောငျး - ၁
F1021 အခြိနျနာရီအကွောငျး - ၂
F1026 လမျးမေး၊ လမျးညှနျခွငျး
F1035 အငျတာနကျမှ ဗနျးစကားမြား
၇။ တရုတျစာ ရေးသားနညျး
G1001 အခွခေံ စုတျခကျြ ၆ မြိုး
G1002 စုတျခကျြကှေး ၂၅ မြိုး
G1003 တရုတျစာလုံး အစိတျအပိုငျးမြား
G1006 တရုတျစာလုံး မှတျသားနညျး
G1009 လကေ့ငျြ့ခနျး - ၁
G1011 လကေ့ငျြ့ခနျး - ၂
G1013 လကေ့ငျြ့ခနျး - ၃
G1015 လကေ့ငျြ့ခနျး - ၄
G1017 လကေ့ငျြ့ခနျး - ၅
G1019 ကွိယာဝိသသေနမြား - ၁
G1020 ကွိယာဝိသသေနမြား - ၂
G1021 ကွိယာဝိသသေနမြား - ၃
G1022 ဝိဘတျမြား - ၁
G1023 ဝိဘတျမြား - ၂
G1024 စကားဆကျမြား - ၁
G1025 စကားဆကျမြား - ၂
G1026 စကားဆကျမြား - ၃
G1028 အညှနျးနာမျစားနှငျ့ မြိုးပွမြား
G1032 နှဈ၊ လ၊ ရကျ
G1037 နရောပွ စကားလုံးမြား
G1041 အသုံးမြားသော ကွိယာမြား - ၁
G1042 အသုံးမြားသော ကွိယာမြား - ၂
G1043 အသုံးမြားသော ကွိယာမြား - ၃
G1044 အသုံးမြားသော ကွိယာမြား - ၄
G1045 အသုံးမြားသော ကွိယာမြား - ၅
G1046 အသုံးမြားသော နာမဝိသသေနမြား - ၁
G1047 အသုံးမြားသော နာမဝိသသေနမြား - ၂
G1048 အသုံးမြားသော နာမဝိသသေနမြား - ၃
G1049 အသုံးမြားသော နာမဝိသသေနမြား - ၄
G1050 အသုံးမြားသော နာမဝိသသေနမြား - ၅
၈။ ဝေါဟာရ ဉာဏျစမျးမြား
စုစုပေါငျး ဗီဒီယိုသငျခနျးစာ (၃၈) ဖိုငျ
★ နမူနာ လလေ့ာရနျ ဗီဒီယိုမြား
ဗီဒီယိုတှကေို ဘယျလိုပို့ခထြားတာလဲ။ လလေ့ာသူတှအေနနေဲ့ ဘယျလို လလေ့ာရမှာလဲ။ ဘယျလောကျထိ ထိရောကျမှု ရှိနိုငျလဲဆိုတာတော့ သငျလညျး သိခငျြမှာပါ။
ဒီတော့ သငျခနျးစာတှကေို မဝယျခငျမှာ ကွိုတငျလလေ့ာနိုငျအောငျ အောကျမှာပေးထားတဲ့ ဗီဒီယို Link တှကေို နှိပျကွညျ့ပွီး နမူနာအနနေဲ့ လလေ့ာကွညျ့ရှုနိုငျပါတယျ။ အဲဒီလို သငျခနျးစာခညျြးပဲ ၂၆၀ ခနျ့ကို သငျ လလေ့ာရမှာပါ။
တရုတျသဒ်ဒါ သငျခနျးစာ - ၁
တရုတျသဒ်ဒါ သငျခနျးစာ - ၂
တရုတျသဒ်ဒါ သငျခနျးစာ - ၃
တရုတျသဒ်ဒါ သငျခနျးစာ - ၄
တရုတျသဒ်ဒါ သငျခနျးစာ - ၅
Writing- တရုတျစာလုံး မှတျသားနညျး
Writing- တရုတျစာလုံး အစိတျအပိုငျးမြား
★ Website မှာ ဘယျလို လလေ့ာမလဲ ?
Chinese for all Admin Team အနနေဲ့ တရုတျဘာသာစကား ပို့ခခြကျြမြားကို Google နဲ့ YouTube တို့မှာလညျး နစေ့ဉျ လှငျ့တငျပေးနပေါတယျ။
ကြှနျတျောတို့ရဲ့ Website လိပျစာမှာ www.languagecentury.com ဖွဈပွီး၊ သငျ သိရှိလိုတဲ့ တရုတျဝေါဟာရတှကေို မွနျမာစာလုံးပေါငျးနဲ့ အလှယျတကူ ရှာဖှနေိုငျအောငျ လှငျ့တငျပေးထားတာပါ။
★ Google မှာ ဘယျလို လလေ့ာမလဲ ?
ဥပမာ - သငျက ငပိရညျ ကို တရုတျလို သိခငျြပါက ကြှနျတျောတို့ Webdite သို့မဟုတျ Google Search Box မှာ " ငပိရညျ တရုတျလို " စသညျဖွငျ့ ရိုကျထညျ့လိုကျရုံနဲ့ အလှယျတကူ လလေ့ာနိုငျပါတယျ။
★ YouTube မှာ ဘယျလို လလေ့ာမလဲ ?
တကယျလို့ YouTube မှာ လလေ့ာလိုပါက Search Box မှာ " Sai Hsai Kham Chinese for all " လို့ ရိုကျထညျ့လိုကျရုံနဲ့ မွနျမာလို ရှငျးပွထားတဲ့ ဗီဒီယို သငျခနျးစာတှကေို အလှယျတကူ လလေ့ာနိုငျပါတယျ။
အွန်လိုင်း သင်တန်း - တရုတ်စကားပြော သင်တန်း - တရုတ်စကား - Chinese - တရုတ်စာ အွန်လိုင်း - Chinese Online Class - အှနျလိုငျး သငျတနျး - တရုတျစကားပွော သငျတနျး - တရုတျစကား - တရုတျစာ အှနျလိုငျးတရုတ်စကား - တရုတ်စကားပြော - တရုတ်ဘာသာစကား - တရုတ်စာ - တရုတ်စကားပြောသင်တန်း - အွန်လိုင်း - သင်တန်း - သင်တန်းကျောင်း - တရုတ်ကျောင်း - တရုတ်ဘာသာ - တရုတ်သင်တန်း - တရုတ်စာပေ - စိုင်းဆိုင်ခမ်းဝ် - တရုတ်ဘာသာနည်းပြ - တရုတ်ဆရာ - မန်ဒရင်း -တရုတျစကား - တရုတျစကားပွော - တရုတျဘာသာစကား - တရုတျစာ - တရုတျစကားပွောသငျတနျး - အှနျလိုငျး - သငျတနျး - သငျတနျးကြောငျး - တရုတျကြောငျး - တရုတျဘာသာ - တရုတျသငျတနျး - တရုတျစာပေ - စိုငျးဆိုငျခမျးဝျ - တရုတျဘာသာနညျးပွ - တရုတျဆရာ - Chinese - CHINESE - chinese - Chinese Class - Chinese Language - Sai Hsai Kham - Chinese for all - Chinese Teacher - Hanyu - 汉语 - 漢語 - 语言中心 - Ever Top - EVER TOP - Foreign Language Center - Online Chinese Class - ONLINE - Second Language
HSK Level 1 ဝေါဟာရများ အပိုင်း - ၄ ။
HSK Level 1 ဝေါဟာရများ အပိုင်း - ၃ ။
HSK Level 1 ဝေါဟာရများ အပိုင်း - ၂ ။
HSK Level 1 ဝေါဟာရများ အပိုင်း - ၁ ။
LOTTERIA - တရုတ်လို ဘယ်လိုခေါ်သလဲ။
ဘွဲ့နှင်းသဘင် - တရုတ်လို ပြောကြမယ်။
မျိုးပြ စကားလုံး 队 duì
မျိုးပြ စကားလုံး 堆 duī
မျိုးပြ စကားလုံး 段 duàn
မျိုးပြ စကားလုံး 顶 dǐng
မျိုးပြ စကားလုံး 点 diǎn
မျိုးပြ စကားလုံး 滴 dī
မျိုးပြ စကားလုံး 打 dá
မျိုးပြ စကားလုံး 场 chǎng
မျိုးပြ စကားလုံး 册 cè
မျိုးပြ စကားလုံး 层 céng
မျိုးပြ စကားလုံး 部 bù
လပြည့်နေ့ - တရုတ်လို ဘယ်လိုပြောလဲ။
အံ့သြခြင်း၊ ချီးကျူးခြင်းတွေကို ဖော်ပြခြင်း။
ပင်ပန်းတယ် - တရုတ်လို ပြောကြည့်ရအောင်။
ဝါကျတို စုစည်းမှု - ၇၀ ။
ဝါကျတို စုစည်းမှု - ၆၉ ။
ဝါကျတို စုစည်းမှု - ၆၈ ။
ဝါကျတို စုစည်းမှု - ၆၇ ။
ဟိန္ဒူဘုရားကျောင်း - တရုတ်လို ဘယ်လိုခေါ်လဲ။
ဘဲဥချဉ်ဟင်း - တရုတ်လို ဘယ်လိုခေါ်လဲ။
နဝရတ် ကိုးပါး အခေါ်အဝေါ်များ။
ကော်ပြန့် - တရုတ်လို ဘယ်လိုခေါ်လဲ။
အာကာသနှင့် စကြဝဠာဆိုင်ရာ ဝေါဟာရများ။
ကွေ့တီယို - တရုတ်လို ဘယ်လိုခေါ်သလဲ။
ဗူးသီးကြော်၊ အချဉ်ရည် - တရုတ်လို ဘယ်လိုပြောလဲ။
ရန်ကုန်မြို့ရှိ လည်ပတ်စရာ နေရာများ။
ခင်ဗျား ဘာလို့ ကျွန်တော်ကို တားတာလဲ။
ငရုတ်ဆုံ၊ ငရုတ်ကျည်ပွေ့ - တရုတ်လို ပြောမယ်။